Dhaliillayaasha iyo dhegaystayaasha Soomaalilaan!
Dhaliillayaasha iyo dhegaystayaasha Soomaalilaan! 0 July 12, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 566
Dhaliillayaasha iyo dhegaystayaasha Soomaalilaan! Dhaliillayaasha iyo dhegaystayaasha
Waagii u beryay siyaasaddii cakirrantay geeridii
marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal (AHUN) ka dib, waynu af go'nay oo aynu
aabbayaasheen fuudka la cabnay. Waxa soo ifbaxay fashilaad ba'an oo xilkasnimo u
badan, kaas oo ku habsaday dhulka nabadda u saaxiibka ah ee Soomaalilaan. Waxaa
qabsaday siyaasaddii iyo majarahii maamul iyo maamul wadaag ee Soomaalilaan rag
aan ri' gees weligood ka tuurin oo faan iyo tookh ula kala baxay dhegaha
dadweynaha iyo indhahoodaba. Sababta dhalisay taasna weli jawaab waan u la'ahay
bulshadana waan ka qancin la'ahay. Muddooyin aad u tiro badan ayaa waxaa la
fasahaadiyey dhammaan goobihii warbaahinta, iyadoo loo adeegsaday codkii
shacabka ee ka bixi jiray mid reerreed oo nin walba afka uu doono labadii ula
kala bixi kara. Tan oo abuurtay awood sheegasho iyo mija-haboow ku habsaday
qaab maamuleedkii siyaasadeed ee waddanku lahaa. Muddo ku dhaw 10sanno ayaan la
dhego barjownay hebel waa kan, iyo waa keer aan afka dhaafsiisnayn. Waxa aanu
ku sabasab-dhawnay qaab u hadalka mucaarid iyo ka muxaafid ee ka dhex alloosan
ragga dawanka siyaasadeed ruxaaya. Marka aad is tidhaa xoogaa fahankaaga u
raarici adeegga siyaasadeed ee ay ku dhisantay Soomaalilaan waxa aad ku maax-dumaysaa
labadan dhambalan ee dhegaha is haysta ee mucaarid iyo muxaafid isku shaadh
eeganaya. Yaab iyo amakaagba way dhalisay sida leexsan iyo hanka ku jira
siyaasi is moodka aan bulshadiisa iyo waddankiisa toona aan u tudhayn.
Hiirraalkii caddaa ee bulshada waxay ku ciirraamiyeen han gaaban oo ah : kannaa
sidan ah iyo keer kalaa sidan ah. Marka aad taariikhda baalka leh dib u milicsato
waxaa kaaga soo baxaya beejajkii halgan ee siyaasiyiintii waddankani dhidbay
iyo heerka ay tusmaysanayeen kadib intii aanay god gelin. Waxaan aad u xasuustaa dadkii aan dheef iyo dhuuni
ku iibsan jirin dhulkooda iyo sharaf dhacanta oo ay dadkooda ku liidaanba.
Raggii dheecaankooda nafeed iyo mid aqooneedba u huray calankan korkeenna waynu
hilmaamnay oo waxaa inoo muuqday dhuuni raadiyihii sharafka ummadda dheefsaday.
Markii aynu maanka iyo maskaxda ka saarnay daryeelka halyeygeennii dhibtooday,
markii aynu maanka ka saarnay islaanta agoonta u miciinta dhuunnigana u soo
saarta ayaa waxaa inagu habsaday qaylo-dhaan dhiig-miirato oo si badheedha ah u
hunguri gadaya kursiga ummadda dhididkooda lagu dhalaaliyo.
Ilaahay naxariistii janno haka waraabiyee,
dhammaan intii qalbiga iyo qoloftaba ugu geeriyootay qaranka awgii waxa aan
maanta leeyahay maahmaahdii ahayd "HALKUU AAR KA KACO, ATOOR
FADH-FADHIISAY", waxa aan idinka tacsiyaynayaa maytiyahay in qarankaad u
god gasheen iyo hankiisii maanta god madoow lagu hubsaday, oo uu nin aan han,
himilo, higsi iyo hiirraal toona aan lahayni uu dhulka jiiday sharafkii aad noo
hagoogteen. Taanu daaqaynana maanta Ilaahay ayaa ka arriminayee, qawdhanka iyo
qallaadka qabyaaladeed waydun karahsaan warkeeda. Samata-bax Ilaahbaa laga
helaaye, waanu ducaysanaynaa geesiyadayadiiyoow.
Maanta waxa aanu kala saari la'nahay
'Dhalliilayaasha' rabitaankooda aan dhaafsiisnayn kursi hunguri ku hodayo, waxa
kale oo aan fajacsanay weli may soo marin ummad dad laba garab ah oo noocan
ahi, ilaa aan maanta la kowsado mooyee!. Waxa iyagu aan dabyar shidayn
;Dhegaystayaasha' aan warka ka gurayn, ee hadday u warceliya is yidhaah daanba
hanjabaad iyo awood tusaalaynta gelaya. Ninkii han lahaayoow hoog!, maantay
maraysaa in dantii dadweynuhu ku dhex baxdo afka qabqableeye qabyaalad mooyee
aan qawl kale ku meel mari karayn. Caloolyoow maxaa inagu ceeryaansan marka aad
adduunka iyo horu-socodkiisa la jaanqaaddo ee aad hadddana yar halacsato dharka
aad xidhantay ee jarqinka iyo hunka u badan, cid ku daryeesha iyo cid ku
danaysana aanad hayn. Waxa ehel ii noqday maskax waayeel oo gudhan iyo maan
da'yar oo meelaysan. Dhexdoodana aan ku aabbe iyo walaalba beellay. Kolba waxaa magli laygu ganay igu gu-gu-jinaya mid
baas oo dhaymo i siinaya haddana aan ogayn inuu dhaawaca i haystaba isagu ka
beerraya uu yahay. Wuu ogyahaye malaa si qudh xumo ah hakaga agguugto ayuu ku
taamayaa. Ilaahoow taada!. Kolba dhaliil ayey sheegayaan oo ay eed uga
dhigayaan masuul ay wax wada qabsi iyo is taakulayn isu ballansadeen.
Masuulkuna mid maahee xilkiisa iyo xakamihiisa kama soo bixi karaayo. Marmar
baad is odhanaysaa malaa in la doortaaba may mudnayn. Istaaqfurulaah!, yaanan
ku dambaabin intaan liidashadiisa sheegayee ummaddu way ba'day markii hadhka
calanka lacag iyo laaluush looga dhigay. Waddan aan ummaddiisu waxba ku qabin
dheef iyo dhidid toona oo shilinkeeda lagu af gembiyo duni kale waa ii kan.
Xisaabtan sharci iyo qaddarin dastuur midna malihi oo kuma dhaqmo, xeer jajab
iyo xakame kalena iskaba illow. Waydiin ayaan qabaa ah : Hadmaa laga baxayaa sidan liidata ee darxumada iyo
diir naxa aan lahayn? Hadmaa laga guurayaa sharci gacan ku samaysadkan oo kaynu
wada jirka u dhiganay lagu taami doonaa? Hadmuu mucaarid xilkiisa iyo
xulashadiisa garan? Hadmuu muxaafid ummadda iyo arladaba u tudhi? Mooyi!,
idinkaa warcelintooda nala wadaagi ummaddu yaabtaye!.
Waxaan ku gunnaanadayaa tixdii Maxamuud Tukaale ee
Danta guud mid laga noqon
Dar Ilaahay loo socon
Degi maayo reerkani.
Qalinkii : Cabdicasiis Ibraahin Ciise 'Daacad'.